Lapho ewachitha futhi obandayo kwamanzi kanye negesi ompompi wasebenzisa izinhlobo ezihlukahlukene nokufakwa, ke unenjongo. Omunye izakhi zawo ezibalulekile ngokulingene valve (noma ama-valve).
Ukulinganisela valve kanye ukuhlela kabusha yabo
Ukulinganisela umphini (noma ama-valve) kungokwalabo isigaba pipe nokufakwa, umsebenzi oyinhloko okuyinto - ukuze ulungise ingcindezi ngokweqile Ukushisa izinhlelo, ukupholisa izinhlelo, kwamanzi kanye holodprovodnyh. valve umfutholuketshezi Kusetshenziswa Ukubophezeleka mpintsha izindandatho namasongo for kwegazi zoketshezi noma ukuhamba komoya negesi mass.
valve okunjalo zihlukaniswe hlobo manual, othomathikhi futhi kuhlanganiswe.
Manual okulinganisa valve (imvelo yasemanzini) ngokuvamile asetshenziselwa kulezo izinhlelo lapho efakwe izindlela static hydraulics. valve okuzenzakalelayo zenzelwe izinhlelo ezisebenza hydraulics ashukumisayo. In izinhlelo ezinjalo, sekulinganisa kuyadingeka maqondana kungenzeka ingcindezi iconsi kanye nesidingo sesimiso somthetho yayo.
ukuzungeza okungafanele yamanzi Ukushisa izinhlelo igcwele eziningi nemiphumela ebuhlungu. Uma radiators futhi kubhayela ingcindezi ongaphakeme kanye nokuntuleka kwamanzi, okokuqala ekamelweni lokushisa kuyoba aphansi, kanti okwesibili, lokhu ukukhishwa ukugqwala of kubhayela. A ngamazinga ashisa kakhulu kakhulu (uma valve sekulinganisa engekho ohlelweni) umsindo nezingahlobene nendaba livela amabhethri kanye amapayipi. Ngenxa yokuthi ama-valve njalo ogibele manifolds kanye risers. Ayikwazi ukwenza ngaphandle kwabo, Heat amaphuzu.
Ukuze compounds nezinye izinto armature ngokulingene umphini unikezwa ngentambo yangaphakathi noma yangaphandle. Maximum Ithempelesha yokusebenzela - degrees 120 ngenhla 0 kuze kube degrees 20 ngezansi 0 (centigrade). Amaphayiphu ebekelwa amadivayisi amanzi, ingcindezi nesilinganiso ukusebenza kanye nezilungiselelo interlocks.
Amaphayiphu kusukela Danfoss
Ezimakethe yokugezela nokufakwa emelelwa anhlobonhlobo izingxenye ezahlukene futhi izingxenye. Omunye abakhiqizi ethandwa kakhulu - Danish yenkampani «Danfoss». Uveza isidingo ngokulingene valve amamaki njengoba «MSV-BD».
imikhiqizo yamanje ezihlobene uhlobo entsha ukulinganisa valve abathintekayo hhayi kuphela e Ukushisa kanye nokupholisa izinhlelo, kodwa futhi GVSah. Bona organically ihlanganisa izici namakhono njengoba valve, ngakho ibhola valve.
Danfoss ngokulingene umphini babe eziningi eziwusizo uma ziqhathaniswa imikhiqizo efanayo:
adambise zonke izinhlobo izilungiselelo;
indawo izinkomba elula esikalini, okuvumela ukuba ubone ukucushwa ngasiphi engela ;
izingono ezimbili wokulinganisa;
ezengeziwe abakhwabanisi umphini livumela izinhlobo ezimbili-indlela amanzi ukuthi;
Ukuvula nokuvala valve lapho izimo ezingalindelekile kungenziwa ngokusebenzisa ukhiye Allen;
isibambo ine inkomba ebonisa isikhundla valve ku "evulekile" / "avaliwe".
Ukuze ulungise ukusebenza efanele valve ngokulingene kuyinto Imitha lamanzi ephathekayo. Lokhu kungabuye kwenziwe esekelwe lokushisa kwamanzi noma izibalo wokubacindezela.
Hlola umphini ukuba futha amanzi: ukubuyekeza, izinhlobo, ukufakwa kanye lobuchwepheshe izici
Udweba kanjani umuntu esigcwele obuphelele? Udweba kanjani isinyathelo ushiya umuntu?
Nje ekhaya yokupheka yesibili
Indlela yokwenza isiteshi se-YouTube futhi imali na?
Izitha Flesch - incazelo nohlu
Black irayisi - umkhiqizo esiyingqayizivele eletha izinzuzo zezempilo